Dowladaha Bariga Afrika waxay qaateen Qorshaha Soo kabashada Dalxiiska ee COVID-19 ee Gobolka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Dowladaha Bariga Afrika waxay qaateen Qorshaha Soo kabashada Dalxiiska ee COVID-19 ee Gobolka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiiradda gobolka Bariga Afrika waxay la shireen inta badan shir guddoominta Wasiirka Dalxiiska iyo Duurjoogta Kenya, Najib Balala waxayna dhammaantood isku raaceen in la qaado tallaabooyin soo kabasho.
Wasiiradu waxay isku raaceen in la qaato hanaan wada jir ah oo isku dubaridan oo lagu bartilmaameedsanayo soo kabashada dalxiiska
Qorshuhu wuxuu ku baaqayaa abuuritaanka xirmooyinka kicinta ee loogu talagalay dib-u-shidaalka qaybta.
Qorsheyso baaqa ah in la taageero maalgashiga dalxiiska ee gobolka oo ay ku jiraan shirkadaha yaryar iyo kuwa yaryar.
U diyaar garowga ka soo kabashada COVID-19 saamaynta faafa ee dalxiiska iyo ilaalinta duurjoogta, Gobollada Bariga Afrika waxay diyaariyeen oo qaateen Qorshaha Soo-kabashada Dalxiiska ee COVID-19 kaas oo doonaya inuu soo nooleeyo waaxda safarka iyo dalxiiska ee sida xun ugu dhufatay aafada adduunka.
Tallaabooyinka noocan ah waxaa ka mid ah abuurista xirmooyin dhiirrigelin ah oo loogu talagalay in dib loo shido waaxda socdaalka iyo dalxiiska iyo in la taageero maalgashiga dalxiiska ee gobolka, oo ay ku jiraan shirkadaha yaryar iyo kuwa yaryar.
Wasiirradu waxay sidoo kale isku raaceen in la qaato hanaan wada jir ah oo isku dubaridan oo lagu bar tilmaameedsanayo soo kabashada dalxiiska oo ay ka mid tahay waxqabadyo loogu talagalay xoojinta tallaabooyinka lagu horumarinayo laguna hirgelinayo heerarka qaran.
Waxay sii tixgeliyeen oo ay ansixiyeen qabyo-qoraalka tilmaamaha gobolka ee dib-u-bilaabidda adeegyada waaxda dalxiiska iyo xarumaha soo-dhawaynta.
Intii ay oggolaanayeen tilmaamaha, wasiirradu waxay isku raaceen in baahi loo qabo EAC tilmaamaha la waafajiyay dib u soo celinta adeegyada dalxiiska iyo soo dhoweynta ee gobolka.
Wasiirada ayaa xustay in tilmaamaha gobolka ay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta isku xirnaanshaha dib u soo celinta adeegyadii dalxiiska iyo gacan ka geysashada dib u dhiska kalsoonida iyo kalsoonida dalxiisayaasha caalamiga ah ee booqanaya gobolka.
Jihooyinka istiraatiijiyadeed iyo tallaabooyinka istiraatiijiyadeed ee u dhigma ee istiraatiijiyadda suuq-geynta dalxiiska bulshada Bariga Afrika ayaa ka mid ah horumarinta alaabada dalxiiska ee gobolka iyo caalamkaba ku tartamaya.
Tilmaamaha kale ayaa ah suuq-geynta Bariga Afrika oo ah halka ugu horraysa ee loo dalxiis tago gobolka Afrika, iyadoo lagu calaamadeynayo Bariga Afrika inay tahay meesha ugu horreysa ee loo dalxiis tago, isla markaana la xoojiyo siyaasadda suuq-geynta iyo qaab dhismeedka hay'adaha iyo kor u qaadista suuqgeynta dalxiiska gobolka Bariga Afrika iyo kobcinta maalgelinta.